Hiob de asaase mu agude toto nyansa ho (1-28)
Nea onipa yɛ de tu asaase mu agude (1-11)
Nyansa som bo sen nhene (18)
Yehowa suro, ɛno paa ne nyansa (28)
28 “Ɛwɔ baabi a wotu dwetɛ,Ɛnna sika kɔkɔɔ a woyiyi mu fĩ nso wɔ baabi a wotu no;+ 2 Wotu dade fi fam,Ɛnna wɔnan* kɔbere fi abo mu.+ 3 Onipa ma esum yera;Owurawura sum kabii mu ne sum mu baabiara,Na ɔkɔhwehwɛ aboɔdenbo.* 4 Otu amoa donkudonku* wɔ baabi a obiara mmɛn hɔ koraa,Baabi a onipa werɛ afi, a onipa biara mfa hɔ koraa;Nnipa bi sian kɔ mu, na wɔkɔsensɛn hɔ. 5 Yenya aduan wɔ asaase ani,Nanso asaase ase de, biribiara adan abutuw te sɛ nea ogya ahyew hɔ.* 6 Abo a ɛwɔ hɔ mu na hoabo wɔ,Na ɛhɔ mfuturu mu na sika kɔkɔɔ wɔ. 7 Ɔkɔre biara nnim ɔkwan a ɛkɔ hɔ,Na akorɔma* ani nhui. 8 Wuram aboa kɛse biara nan nsii hɔ;Gyata* biara nkɔfaa hɔ. 9 Onipa de ne nsa pae abo a ɛyɛ den;*Otutu mmepɔw ase ma edwiriw gu; 10 Otwitwa nsuka+ wɔ abotan mu,Na n’ani hu ade a ɛsom bo biara. 11 Osisiw baabi a nsubɔnten fi ba,Na oyi nea ahintaw ba hann mu. 12 Nanso nyansa de, ɛhe na ɛwɔ?+Na ntease nso, ɛhe na efi ba?+ 13 Onipa biara nnim sɛnea ɛsom bo fa,+Na wɔrentumi nhu wɔ ateasefo asaase so. 14 Nsu a emu dɔ ka sɛ, ‘Enni me mu!’ Na ɛpo nso ka sɛ, ‘Enni me nkyɛn!’+ 15 Wɔrentumi mfa sika kɔkɔɔ amapa ntɔ,Na wɔrentumi nkari dwetɛ mfa nsesa.+ 16 Wɔrentumi mfa Ofir sika kɔkɔɔ ntɔ,+Na abohene tuntum a ɛho yɛ na ne hoabo nso, wɔrentumi mfa ntɔ. 17 Wɔrentumi mfa sika kɔkɔɔ ne ahwehwɛ ntoto ho,Na wɔrentumi mfa biribiara a wɔde sika kɔkɔɔ amapa* ayɛ nsesa.+ 18 Ɛpo mu abohene ne ahwehwɛbo mpo ne no nsɛ,+Efisɛ nyansa kotoku ma bo yɛ den sen abohene kotoku ma. 19 Wɔrentumi mfa topas+ abohene a efi Kus ntoto ho;Na wɔrentumi mfa sika kɔkɔɔ amapa mpo ntɔ. 20 Ɛnde ɛhe na nyansa fi?Na ntease nso, ɛhe na efi ba?+ 21 Wɔde ahintaw ɔteasefo biara ani,+Na wɔde asie wim nnomaa. 22 Ɔsɛe amoa* ne owu ka sɛ,‘Ɛho asɛm kɛkɛ na yɛn aso ate.’ 23 Onyankopɔn na onim ɔkwan a yɛbɛfa so ahu;*Ɔno nko ara na onim baabi a ɛwɔ,+ 24 Efisɛ ohu asaase ano noho,Na ohu biribiara a ɛwɔ ɔsoro ase.+ 25 Bere a ɔmaa mframa ahoɔden,*+Na osusuw nsu,+ 26 Bere a ɔhyɛɛ mmara maa osu a ɛtɔ,+Na otwaa kwan maa omununkum a ɛde osuframa ne aprannaa ba no,+ 27 Ɛnna ɔde n’ani huu nyansa, na ɔkyerɛkyerɛɛ mu;Ɔmaa ase timii, na ɔsɔ hwɛe. 28 Na ɔka kyerɛɛ onipa sɛ: ‘Hwɛ! Yehowa suro, ɛno ne nyansa,+Na obi twe ne ho fi bɔne ho a, ɛno ne ntease.’”+
^ Nt., “wohwie.”
^ Nt., “ɔbo.”
^ Anaa “nkoron; amoa a wotu fagude wom.”
^ Ɛbɛyɛ sɛ ɛfa wɔn a wotu fam agude no dwumadi ho.
^ Anaa “ɔsansa.”
^ Anaa “Gyatanini a ne ho yɛ den.”
^ Nt., “abo a ano yɛ nnam.”
^ Anaa “sika kɔkɔɔ a wɔayiyi mu fĩ.”
^ Nt., “Ɔsɛe.”
^ Anaa “ahu nyansa.”
^ Nt., “mu yɛɛ duru.”